Andro: 7 mey 2020
Nambaran'ny minisitry ny varotra fa tsy misy vidiny amin'ny varotra masika
Ao anatin'ny firafitry ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Fivorian'ny Kabinetra tamin'ny 4 Mey 2020, izay nanambarana ny kalandrie fampandehanana ny praiminisitra Recep Tayyip Erdoğan, dia afaka nivarotra saron-tava fandidiana tamin'ny toeram-pivarotana. [More ...]
Nanomboka ny fandoavana ny vola fanohanana vola
Ny fandoavam-bola TL 39 isan'andro aloa amin'ny mpiasa izay miala amin'ny fialan-tsasatra malalaka noho ny coronavirus na ny asan'izy ireo dia hanomboka apetraka amin'ny zoma 8 may. Miankina amina trosa ny zom-pirenena [More ...]
Ny tsenan'ny fambolena nomerika dia hamporisika ny rehetra amin'ny famokarana
Ny tsenan'ny fambolena nomerika dia hahita mora foana ny vokatra amin'ny tantsaha miaraka amin'ny tsenan'ny fambolena nomerika, izay manamora ny fidiran'ny tantsaha amin'ny tsena. Hayrettin Plane, Filohan'ny Fikambanan'ny Voankazo Mpanondraka Voankazo sy legioma Aegean, [More ...]
615 Million Liras Investment Incent ho an'ny Eskişehir
Ny filohan'i Eskişehir OSB Nadir Küpeli dia nilaza hoe: "Ny firongatry ny fampiasam-bola miaraka amin'ny fanamarinana entitra any Eskişehir dia mampitombo ny fanantenana sy ny fanantenantsika amin'ny ho avy sy ny fitomboan'ny orinasa." Minisiteran'ny indostrian'ny indostria sy ny teknolojia sy ny renivohitra ivelany [More ...]
Mitohy hatrany ny tetikasan'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa any amin'ireo tranonkala an'arivony
Ny ministeran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia nanatanteraka tsara ny fizotrany ary nandray fepetra lehibe tamin'ny fandrindrana tanteraka miaraka amin'ny minisiteran'ny fahasalamana, hatramin'ny andro voalohany tamin'ny Coronavirus New Type nipoitra teto amin'izao tontolo izao. indrindra [More ...]
Ho any amin'ny tantara rahampitso alina i Marmaray!
Ny marmaray Bosphorus Tube Crossing, izay mamela ny mpandeha lalamby tsy tapaka sy ny fitaterana entana eo anelanelan'ny kontinanta Azia sy Eropa, dia miomana amin'ny andro manan-tantara iray. Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu, Marmaray avy any Beijing [More ...]
Masinina tokony hampiasaina ao amin'ny National Combat Aircraft Prototypes izay nomena
Filohan'ny Repoblika Tiorka, Filohan'ny Indostria Miaro. Dr. Nandritra ny fandefasana mivantana tamina gazety indostria, İsmail DEMİR dia nanao fanambarana momba ireo milina hampiasaina amin'ny prototipees of the National Combat Aircraft. Namboarin'ny filoha DEMİR [More ...]
Hosokafana ny trano fiantsonan'ny fiara ambanin'ny tany ao Hayrabolu amin'ny 29 Oktobra
Ny Ben'ny tanàna miketrika Tekirdag, Kadir Albayrak dia nanao famotopotorana tao amin'ny zaridainam-panjakana ambanin'ny tany ambanin'ny tany Hayrabolu, izay eo am-panamboarana ao Hayrabolu, ary nahazo fampahalalana avy amin'ny manampahefana momba ny sata farany amin'ny asa. Tekirdağ Metropolitan mpikambana ao amin'ny Filankevitra monisipaly [More ...]
Voavaha ny olana momba ny motera ALTAY Main battle Tank
Filohan'ny Fiadidiana Tiorka, Indostrian'ny fiarovana. Dr. Nandritra ny fampielezam-baovao mivantana tamin'ny haino aman-jery sosialy, i İsmail DEMİR dia nanohina ny olan'ny motera misy ny ALTAY Main Battle Tank. Tao anatin'ny fanambarana nataon'ny Filoha DEMİR, "Miaraka amin'ny masin'ny ALTAY [More ...]
6,5 tapitrisa TL fanampiny no nomena ny orinasa ao amin'ny tsipika hafainganam-pandeha ambony Ankara Istanbul!
Askedmer Fethi Gürer avy ao amin'ny CHP nanontany ny Minisiteran'ny fitaterana mikasika ny fitrandrahana 6 tapitrisa dolara 398 XNUMX TL, izay natokana ho an'ny orinasam-pifandraisan-davitra Sigma İnşaat ao amin'ny Tetikasa fiaran-dalamby any Ankara-Istanbul. Minisitry ny fitaterana Karaismailoğlu, "Mitohy ny fitsarana" [More ...]
Mask ny mpiambina mpiaro mpiaro no nozaraina tamin'ireo mpamily fitateram-bahoaka tany Kahramanmaraş
Maskà mpiaro ny tarehy dia nizara tamin'ireo mpamily fitateram-bahoaka any Kahramanmaraş; Kahramanmaraş Metropolitan Municipal dia nanomboka nizara fiarovana amin'ny tarehy ho an'ireo mpamily fitateram-bahoaka ao anatin'ny faritry ny fisorohana ny valan'aretina coronavirus. Kaominin'i Metropolitan, miaraka amin'ny fanaovan-tsarimihetsika [More ...]
Nosokafana ny birao Liaison ho an'ny tetik'asa fizahan-tany
Ao Şanlıurfa, izay iray amin'ny faratampon'ny fizahan-tany ara-pinoana, nosokafana ny birao fifandraisana iray ho an'ny 'Tetikasa Kolontsaina sy fizahan-tany', izay hampifandray ny fahefan'i Halil-ur Rahman sy Eyyüp Mpaminany. Metropolitan Munisipaly [More ...]
MOTAŞ dia mitohy hamindra ny fiara fitaterana fiara sy ny trambus
Malatya Metropolitan Munisipaly MOTAŞ bus sy tram, izay entin'olona an'arivony isan'andro, no nodiovina sy nodiovina taorian'ny fizahana farany ary efa vonona amin'ny serivisy ho an'ny ampitson'iny. [More ...]
Miasa ho an'ny Overpass ho vita amin'ny sekapark Tram Stop
Kocaeli Metropolitan Metropolitan, izay nanamora ny fitaterana tamin'ny fanomezana ny zotra Akçaray amin'ny serivisy ho an'ny olom-pirenena, dia nanao volavolan-dalàna ho an'ny famakivaky ny mpandeha an-tongotra akaikin'ny Fijanonan'ny Sekapark Tram tamin'ny volana martsa. Nandeha tamin'ny kamiao [More ...]
Boardzmir Board of hygiene Tourism momba ny fizahantany
Munzmir Metropolitan kaominina dia nametraka Birao momba ny fahadiovana ny fizahantany. Ny birao dia nanomboka namantatra ny fitsipi-pikajiana momba ny fidiovana sy fiarovana. Ny fenitry ny fahadiovan'ny filoha Soyer momba ny fizahan-tany eo an-toerana voalohany any Turkey [More ...]
Fa maninona no natsahatra ny fandefasana ny T-129 ATAK Helikoptera?
Filohan'ny Fiadidiana Tiorka, Indostrian'ny fiarovana. Dr. Nandritra ny fampielezam-baovao mivantana tamin'ny haino aman-jery sosialy, i explainedsmail DEMİR dia nanazava ny antony nanemorana ny fandefasana ireo helikoptera TAK 129 ATAK. Fanafihana T-129 ATAK, Helikoptera Fanaraha-maso sy Tactical [More ...]
Ny fizotry ny famokarana faobe avy amin'ny rafi-piadiana misoroka ny fiaramanidina ho an'ny fiaramanidina Air H NationalSAR-A nanomboka
Filohan'ny indostrian'ny fiarovana Tiorka. Dr. İsmail DEMİR dia nanao fanambarana momba ny Rafitra Misilà Rosiana Fiarovana an'habakabaka ambany indrindra H AirSAR-A ary ny rafi-piadiana miserana an'habakabaka Mediam-piaramanidina Faharoa momba ny fiarovana H AirSAR-O. [More ...]
Apetraka 375 amin'ny lalam-panjakan'ny laharana faha-6 sy laharana ofisialy 31.12.2008 tamin'ny daty 27097, no hiasa ao anatin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Ala, sampana teknolojian'ny fampahalalana. [More ...]
Nitombo ny fanondranana entana any amin'ny sehatry ny fambolena na dia eo aza ny Kovid-19
Ny fanondranana entana vokatra any Torkia, karazana coronavirus (Kovid-19) vaovao izay natao tao anatin'ny aloky ny fitomboan'ny valanaretina tamin'ny vanim-potoana Janoary-Aprily. FAMPISEHOANA NY FIVORIANA AGRICULTURAL 2,9 Nandritra io fotoana io, ny fambolena, indostria ary fitrandrahana Tiorka [More ...]
Namita ny vanim-potoana voalohan'ny tolona atao amin'i Coronavirus i Torkia
Minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca nanao fanambarana nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natao taorian'ny Fihaonan'ny Komity Mpanolotsaina momba ny siansa momba ny Coronary natao tamin'ny fihaonambe video tao amin'ny Bilkent Campus. Tamin'ny lahateniny, nandritra ny valanaretina, niaraka tamin'ny fanohanan'ny 83 tapitrisa, ny "tafika fahasalamana" [More ...]
Volavolan-tsosialy 7 arivo no voaloa ao anatin'ny 16 ora miaraka amin'ny fampiharana an'i Suspended Invoice icemamoğlu
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nizara ny angon-drakitra voalohany momba ny fampiharana "invoice miandry" ao amin'ny kaontiny media sosialy. Raha ny angon-drakitra nambaran'i İmamoğlu, tao anatin'ny fampiharana 7 andro voalohany, fianakaviana 16 100 no sahirana, 2 tapitrisa [More ...]
Ny saran-dalan'ny mpiady fiara misy mandritra ny 3 taona ao Eurasia Tunnel dia hotanterahina ao anatin'ny 1 taona
Tao anatin'ny 3 taona lasa izay, 470 tapitrisa TL dia voaloa amin'ny alalàn'ny fiantohana fiara ao amin'ny Tunnel Eurasia. Io fandoavana io dia heverina ho 2020 tapitrisa lira farafahakeliny amin'ny 400. Sözcü Avy amin'ny gazety İsmail Şahin [More ...]
Tiorkia İyidere mila Logistics Center
Hayati Yazıcı, lefitry ny filoha lefitry ny antoko AK sy ny Depiote Rize, miaraka amin'ny tetibolam-pirenena, fa tsy modely fanodinana-famindrana-foiben'ny Rize City Hospital amin'ny fantsom-dranomasina any an-dranomasina (any amin'ny morontsiraky ny Distrikan'i Gülbahar). [More ...]
Minisitra Pekcan, Torkia-Europe Business Council Nihaona tamin'ny Filoha ny areti-mifindra Trading Post
Ny minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan dia nanao fifanakalozan-kevitra isam-paritra tamin'ireo mpanondrana entana ary mpanolotsaina ara-barotra eran'izao tontolo izao mba hanehoana ny vokatry ny fipoahan'ny coronavirus (Kovid-19) vaovao ary hamantatra ireo làlana ho an'ny vahaolana. [More ...]
Mangataka ny filankevitr'i Tiorka i Pekcan mba hiasa miaraka amin'ny fampiasana BTK Line amin'ny fomba mahomby
Ny minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan dia nanambara fa ny varotra miaraka amin'ny vola amin'ny firenena dia manamora ny varotra iraisam-pirenena. [More ...]